ရန်ကုန်သားတာတေ| May 16, 2012 | Hits:18,523
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ထွန်း May 16, 2012 - 6:24 pm	ကြိုက်တယ်
Reply	ုkk May 17, 2012 - 4:57 pm	မီဒီယာလဲမှန်တယ်အန်အယ်လ်ဒီလဲမှန်တယ်မှားနေတာက… ????????သိရင်ပြောပြပေးပါ… Reply	kk May 17, 2012 - 5:31 pm	စစ်မှန်တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိစ္စကို.. တစ်ဥိးတယောက်၇ဲ့ နောက်လိုက်ဖြစ်မှဖော်ဆောင်လို့ရတာလား.. ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအပြန်လှန်လေးနက်တဲ့ နားလည်မှုနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးလက်တွဲပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးဖော်ဆောင်လို့ကော်မရနိုင်ဘူးလား.. ဒီမိုကရေစီရဲ့ သဘောတရားတွေကိုတဦးတယောက်ကတရားဟောပြောပြမှသိနိုင်တာလား.. ကိုယ့်ဖာသာကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား……..့ 